Sida loo naqshadeeyo buug-yaraha xayaysiisyada: qaabaynta iyo sifooyinka guud | Hal-abuurka Online
Marka aan abuurno aqoonsiga shirkadda ee astaanta, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo dhowr weji si calaamaddu u hesho natiijo wanaagsan labadaba suuq-geynta iyo guud ahaan naqshadeynta. Mid ka mid ah wejiyadan ayaa shaki la'aan ah marxaladda xayeysiinta.
Samaynta buug-yaraha ama boodhadhka xayaysiisyadu waa qayb ka mid ah kor u qaadida iyo iibinta astaanta, inkastoo qaar badani hoos u dhigaan sababtoo ah waa hal shay oo kale oo geeddi-socodka ah, dhab ahaantii, waa 50% booska shirkadu ku leedahay suuqa. Taasi waa sababta qoraalkan, Waxaan rabnaa inaan ku ogeysiino buug-yaraha xayeysiinta qaarna waan ku tusi doonaa talooyin ama talo si astaantaadu u yeelato aqoonsiga iyo qiimaha ay mudan tahay.
1 Buug-yaraha xayeysiinta
1.2 noocyada buug-yaraha
1.2.1 Xaashiyaha, xaashiyaha ama warqadaha
2 Sida loo naqshadeeyo buug-yaraha
2.1 Ku qeex dadka la beegsanayo ee ku jira buug-yarahaaga
2.2 Hore: Nakhshad halku dhig wanaagsan ama fariin toos ah
2.3 Dhamaadka Hore: Abuur habaysan, si sahlan loo fahmi karo nuxurka
2.4 Hore: Isticmaal madaxyada iyo sharraxaadaha
2.5 Gadaal: Shaqaalaysii faahfaahin dheeraad ah
2.6 Gadaal: isticmaal sawiro ama sawiro soo jiidasho leh
Buug-yaraha ama buug-yaraha xayaysiisyada waxaan dhihi karnaa waa nooc ka mid ah xaashida daabacan oo ay ku jiraan qoraal iyo sawirro kuwaas oo sidoo kale lagu daabacay xaashiyaha. Buug-yaraha waxaa loo qaabeeyey sidii qalab xayeysiis ah, taas oo ka dhigaysa mid aad u soo jiidasho leh in ay noqoto dhexdhexaadiye khadka tooska ah oo kor u qaadaya.
Ahaanshaha dhexdhexaadiye jireed, waxaa loo abuuray in lagu bixiyo gacanta iyo dadka ugu badan ee suurtogalka ah. Maalin kasta waxaa jira shirkado badan oo isticmaala kheyraadka noocaan ah, maadaama aan ka helno baararka, kafateeriyada, maqaayadaha, jimicsiga, tiyaatarada, iwm.
Laakiin wax kastaa maahan kuwa ku saabsan qaybahan, maadaama waaxda dalxiisku ay sidoo kale ku soo gasho ciyaartan noocaan ah. Qaar badan ayaa sidoo kale u isticmaala inay kor u qaadaan magaalada iyo meelaha ugu dalxiiska badan iyo habkan waxay maamulaan inay soo jiitaan dalxiisayaasha aduunka oo dhan ka yimid.
Waxaa jira noocyo badan oo buug-yaraha ah ( hoos ayaan si kooban u sharxi doonaa qaababka ugu muhiimsan ee hadda la heli karo), laakiin midka ugu caansan wuxuu u eg yahay qaab leydi ah oo u eg inuu ka kooban yahay laba dhinac. Waxaan sidoo kale helnaa waxa aan naqaanno triptychs ama diptychs.
Inta badan waxaa la socda qoraalo iyo sawirro awood u leh inay soo jiitaan dareenka dadweynaha. Intaa waxaa dheer, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale isticmaala ilaha internetka sida bixinta Baro xisaabtaada Intsagram ama Facebook si markaa isticmaaluhu ama daawadaha uu ugu horeeyo dhammaan macluumaadka suurtogalka ah ee ku saabsan shirkadda iyo badeecada.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo warbaahin ah, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa muujinaya macluumaadka aad rabto in dadka kale ay arkaan, si ka duwan. waxaan bilaabaynaa
Xaashiyaha, xaashiyaha ama warqadaha
Waxay yihiin buug-yaraha ganacsiga ugu aasaasiga ah uguna jaban. Caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa ololeyaal macluumaad oo baaxad leh, iyadoo lagu uruurinayo macluumaadka aasaasiga ah meel yar. Waxay ka kooban yihiin hal xaashi oo furfuran oo lagu daabacan karo hal ama labada dhinac. Caadi ahaan waa leydi, inkastoo ay sidoo kale noqon karaan afar gees. Cabbirkoodu waa u dhexeeya A6, A5, 10 x 21cm iyo ugu badnaan A4inkastoo aysan aad u badneyn.
Diptychs waa buug-yaraha xayaysiisyada kuwaas oo ku laalaaban laba dhinac oo isku mid ah. Guud ahaan waxa jira 4 bog. Cabbirka ugu badan ee loo isticmaalo warqadaha waa DinA4, kuwaas oo ah 21 x 29,7cm. Marka la xiro, waxay sameyn doontaa laba jir ama dabo 14,85 x 21cm midkiiba. Maaddaama ay jiraan laba dabo oo keliya oo leh laalaab dhexe, wejiyada gudaha mar walba isku mar bay furnaan doonaan, sidaas darteed waa in ay jiraan sii socosho iyo is-waafajin dhexdooda ah.
Triptychs-yadu waa buug-yaro xayeysiis ah oo leh laba laalaab, sidaa darteed waxay sameeyaan saddex dhinac oo isku mid ah midkiiba. Guud ahaan waxay sameeyaan 6 bog, 3 gudaha ah iyo saddex dibadda ah. Sida diptych-yada, waxay caadiyan leeyihiin cabbirka DinA4. Sidaa darteed marka la xiro, saddexdooda jir ayaa cabbiri doona 9,9 x 21cm midkiiba.
Quadriptychs waa buug-yaraha xayaysiisyada kuwaas oo ku laalaaban afar dhinac oo isku mid ah. Guud ahaan waxa jira 8 bog. Iyadoo leh dusha ballaaran oo 4 baalle ah, waxay oggolaadaan inay bixiyaan macluumaad dhammaystiran, si habaysan oo la fahmi karo. Waxa jira dhawr cabbir oo noocaan ah oo buug-yaraha ah, laga bilaabo DinA4 ilaa DinA7, isagoo ah DinA4 ugu badan. Quadriptychs sidoo kale waxaa lagu samayn karaa qaab labajibbaaran, oo si weyn loogu isticmaalo dalxiiska iyo qaybta gastronomic.
Polyptychs waa qoraallo xayaysiis ah oo ka kooban afar dhinac ama jir. Waxay ka kooban yihiin meelo badan oo ay ku sheegaan faahfaahinta, si ay u badan yihiin sida buug-yaraha, halkaas oo lagu bixin karo alaabooyin ama adeegyo kala duwan. Haddii aan isticmaalno noocaan, waxaa si gaar ah muhiim u ah in macluumaadka loo habeeyey si macquul ah oo dareen leh, si ay u sahlanaato oo u raaxaysato akhristuhu inuu raaco.
Sida loo naqshadeeyo buug-yaraha
Si aad u ogaato sida loo naqshadeeyo buug-yaraha xayeysiiska, waxaan ku tusineynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad tixgeliso inta lagu jiro habka abuurista, ma aha oo kaliya buug-yaraha laakiin sidoo kale calaamadda, habkan waxaad ku ogaan doontaa nooca buug-yaraha aad u baahan tahay iyo sida aad ugu baahan tahay.
Ku qeex dadka la beegsanayo ee ku jira buug-yarahaaga
Waa muhiim in ka hor inta aanad ogaanin sida aad u rabto in buug-yarahaagu u ekaado, aad fahanto oo aad ogaato Cidda aad la hadasho iyo nooca isgaarsiineed ee ay tahay inaad ku hadasho. Maadaama buug-yaraha loogu talagalay qofka da'da yar ee heerkiisa dhaqan-bulsho uu noqon karo mid dhexdhexaad ah lama mid noqon doono qof weyn oo leh heer aad u sarreeya.
Taasi waa sababta ay aad muhiim ugu tahay inaad u qaybiso buug-yarahaaga iyadoo loo eegayo da'da, dakhliga, juqraafiga, heerka dhaqan-dhaqameed, heerka dhaqan-dhaqaale, iwm. Tani waa halka ay ka soo galaan qodobbada muhiimka ah ee dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, iyaga oo qeexaya bartilmaameed oo marka aad haysato, waxaad bilaabi doontaa inaad u qaabayso buug-yarahaaga hab badh-otomaatig ah.
Hore: Nakhshad halku dhig wanaagsan ama fariin toos ah
Sawirka wanaagsan ee xoojinaya buug-yaraha ayaa la mid ah sida qoraalka wanaagsan ee qeexaya oo koobaya dhammaan buug-yaraha iyo waxaad rabto inaad gudbiso. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in dhinaca hore ee buug-yaraha aad wax ku qorto nooc ka mid ah halhays ama fariin gaaban iyo warbixin kooban oo maamusha inay soo jiidato dhagaystayaashaada, taas oo ah, waxaad u baahan tahay inaad fahanto waxa ay tahay inaad dhigto xagga hore, dhexda iyo gadaasha buug-yaraha.
Tusaale ahaan hal-ku-dheggu kuma filna, daboolka waxa loo baahan yahay in lagu daro farriin toos ah ama mid cad si ay iyaduna u soo jiidato dareenka akhristaha. Waxaad ku dari kartaa su'aalo si ay u abuuraan nooc khiyaano ah.
Haddii aad xayeysiiso badeecad, waa inaad alaabtu ha iska hadasho, Haddii buug-yarahaagu uu yahay mid kooban oo macluumaad ah oo ku saabsan ganacsiyadaada, hor dhig sumaddaada oo ku dar khad sumadeed. Haddii buug-yarahaagu uu yahay mid kooban oo macluumaad ah oo ku saabsan wax-soo-saarkaaga ganacsi, hor dhig astaantaada iyo xarunta.
Dhamaadka Hore: Abuur habaysan, si sahlan loo fahmi karo nuxurka
Haddii aad u malaynayso in aad ku guulaysatay soo jiidashada dareenka akhristayaashaada, hadda waa wakhtigii aad siin lahayd waxa ay dhab ahaantii rabaan, macluumaadka ku saabsan alaabtaada ama adeegyadaada.
Si taas loo sameeyo, waxa fiican in la qoro qoraal si fiican ugu habboon saddex qaybood, buug-yaraha saddex-laaban, oo mid walba leh ciwaankiisa iyo sharraxaad gaaban.
Hore: Isticmaal madaxyada iyo sharraxaadaha
Ciwaannadaada waa inay si cad oo kooban u sheegaan soojeedin kasta oo ganacsi ama sifada badeecada, si akhristayaasha ay u arki karaan jaleeco waxaad horumarinayso.
Waa muhiim in cinwaanadu si madax-bannaan u gudbiyaan macnaha iyada oo aan sharraxaad dheeraad ah la helin. Isku day inaad iska ilaaliso joojinta ereyada sida "intro" ama "ku saabsan", adigoo door bidaaya sharraxayaayaal badan. Ciwaan kasta hoostiisa, waad awoodaa si faahfaahsan u sharax badeecada ama adeega.
Sifooyinkan u dhig mid gaaban oo ilaa inta suurtogalka ah. Isku day inaad siiso akhristayaashaada macluumaad ku filan oo kaliya si ay xiisaynyan, oo u ogolow inay u isticmaalaan buug-yarahaaga barta bilawga ah si ay u aadaan dukaankaaga ama mareegahaaga.
Gadaal: Shaqaalaysii faahfaahin dheeraad ah
Kadib markaad qeexdo waxa aad soo bandhigtay, hubi inaad ku darto wax kasta oo macmiilkaagu u baahan doono inuu qaado, midkoodna ciwaanka iimaylka si aan kula soo xidhiidho, cinwaanka ganacsigaaga, ama isku xirka shabakadaada.
Qoraalka labaad wuxuu socon karaa haddii aad ku qancinaysay, markaa waxaad ku kalsoonaan kartaa in akhristahaagu bogga u rogo si uu u helo macluumaadkan kaligiis. Waa dhaqan caadi ah in macluumaadka xiriirka lama huraanka ah la dhigo bartamaha.
Gadaal: isticmaal sawiro ama sawiro soo jiidasho leh
Si aanu buug-yarahaagu u noqon mid madhan oo qoraal badan ku jiro, waxa uu u baahan yahay inuu ahaado dib u rartay sawiro iyo sawiro in si uun ama si kale ay u fududayn karto in la gaadho lana soo jeediyo dareenka dadweynaha.
Sawir, astaanta ama sawirka alaab kasta oo la soo bandhigo.
Sawir la soo bandhigay, summada, ama sawirka boggaaga cinwaanka (ikhtiyaar)
Qaar ka mid ah sawirro dheeri ah, astaamo ama sawirro qaybahaaga "Xiriirka" iyo "ku saabsan"
Marka la soo koobo, waxaan rajaynaynaa in talooyinkan ama hagaha yar ay kaa caawiyeen inaad bilowdo naqshadaynta buug-yarahaaga xayaysiis. Waa muhiim inaad ogaato in tani ay tahay tusaale kaliya, waxaad u qaabayn kartaa sida ugu fiican ee ku habboon astaantaada iyo shuruudahaaga. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa noocyo kale oo ka mid ah noocyada kala duwan ee aan ku tusnay haddii ay dhacdo inaad xal u weydo midka aad la shaqaynayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo naqshadeeyo buug-yaraha xayeysiinta